Tonga ny Galaxy S8, ampitahainay amin'ny LG G6 sy Huawei P10 | Vaovao momba ny gadget
Eto izy, ny tsena dia nitondra ny sain'ilay orinasa Koreana Tatsimo malaza indrindra, Samsung dia nanolotra tamim-pireharehana ny Galaxy S8, ny efijery rehetra hanavao, hanova ny fomba fahazoantsika ny smartphone ary ambonin'izany rehetra izany dia manohy mivarotra mihoatra ny tsy nisy. Na izany aza, nandritra ny Kongresy Iraisam-pirenena Momba ny finday dia afaka nahazo andian-vokatra izay avo indrindra amin'ny telephony izahay, Mendrika ve ny Samsung Galaxy S8 raha oharina amin'ireo sainam-pirenena hafa toa ny Huawei P10 na LG G10? Andao jerena manokana ireo fitaovana telo an-tampon'ny-tsipika ireo hanampy anao hanapa-kevitra.
Hanao famerenana kely izahay amin'ireo fizarana teknika sy famolavolana mifandraika indrindra, fizarana isaky ny fizarana, mba hahafahanao manapa-kevitra raha misy ny safidinao amin'ny karazana pitsopitsony.
1 Ny zava-misy ankehitriny amin'ny orinasa tsirairay
3 Ny fakantsary
4 Fahombiazana lehibe
5 Ny efijery
6 Lafiny famaritana hafa
Ny zava-misy ankehitriny amin'ny orinasa tsirairay
Hanomboka amin'ny topy topimaso ankapobeny momba ny toetoetran'ireto telo ireto atokana. Huawei dia miavaka amin'ny zava-drehetra, orinasa iray amin'ny fitomboana tsy tapaka izay nanjary mari-pahaizana any Espana sy Sina, izay manjaka amin'ny tsena, mivarotra fitaovana marobe amin'ny laharana rehetra ary midina any afovoany sy ambany ny orinasa iray marobe toa an'i Samsung.
Etsy ankilany manana Samsung isika, miasa mafy hitazomana ny fahombiazan'ny Galaxy S6 ary mbola miery eo ambanin'ny rahona tsy fahatokisana ateraky ny tsy fahazoana aina nateraky ny fipoahan'ny Galaxy Note 7, fitaovana iray nesorina tamin'ny tsena (tamin'ny fotoana roa) izay nambara fa fanontana "nohavaozina" vaovao. Ny famerenana telefaona mampidi-doza eny an-tsena dia mety hitera-doza ho an'ny orinasa Koreana Tatsimo, na dia efa mazava aza ny fanoloran-tena amin'ny Galaxy S8, ary nahatonga antsika tsy hiteny intsony ny volavola.
Niafara tamin'ny LG izahay, orinasa Koreana Tatsimo iray hafa izay nanohy nanandrana nanaporofo ny tenany. Nanjary fitaovana ankafizin'ny mpampiasa Android ny G3, na izany aza, ny forona sy ny fanoloran-tena amin'ny teknolojia maodely ao amin'ny LG G5 dia nahatonga ny orinasa nianjera tamin'ny varotra ambany fivarotana. Ny fanoloran-tena ho an'ny G6 dia nahery vaika, mampiseho endrika miavaka amin'ny tontonana eo aloha izay tsy namela olona tsy hiraharaha mihitsy, ary izay mahatonga ny fikasany eny amin'ny tsena hazava tsara.
Eto isika dia miditra amin'ny lafiny voafaritra indrindra amin'ny rehetra. Na izany aza, niray feo fa Samsung dia nanjary benchmark hatramin'ny nahatongavan'ilay Galaxy s6 mamiratra. Manohy mitazona ny firafitry ny vy eo anoloana sy ao aorian'ny vera izay mahasarika izay rehetra mikasika azy. Raha ny eo aloha, tena sahy ny isan-jaton'ny efijery, voaravaka miolakolaka izay mety tsy sitraky ny purista indrindra, saingy tsy isalasalana fa hanamarika vanim-potoana iray izany. Saingy, nandany azy ny famindrana ny sensor fantsom-panafody ho any aorian'ny fitaovana. Lafiny miova iray hafa ihany koa ny bokotra eo aloha, izay lasa eo amin'ny efijery, zavatra mbola tsy fahita tao amin'ny Samsung tamin'ireo toetra ireo.
Huawei miaraka aminy P10 angamba no filokana faran'izay mpandala ny nentin-drazana, tontonana eo aloha misy bika tononina ary chassis metaly iray saika feno, miaraka amina vera kely hiarovana ireo fakantsary roa aoriana. Huwei dia tsy te-hirehareha be momba izany, Tsara homarihina fa amin'ity indray mitoraka ity dia ahitantsika eo alohan'ilay sensor momba ny dian-tànana.
Ny LG G6 no filokana mpanelanelana, tontonana fisaka fisaka fa manararaotra ny efijery tsy misy toy izany, feo mamirapiratra izaitsizy ary tsy misy zorony. Na izany aza, tsy naniry ny hifidy be loatra amin'ny fanavaozana any aoriana izy ireo, toerana itazanan'izy ireo fakan-tsary roa sy ilay mpamaky ny rantsan-tànana, zavatra iray mampiavaka ny laharam-pahamehana LG G hatramin'ny nanombohany, bokotra miverina foana.
Amin'ity tranga ity dia te-hampinono i Huawei noho ny fiarahany amin'ilay marika malaza Leica, manam-pahaizana momba ny sary nandritra ny am-polony taona maro. Na izany aza, ny tena zava-misy dia mitazona ilay fakantsary farany mitovy amin'ny Huawei Mate 9 (fitaovana hafa mahatalanjona), manolotrao monochrome 20 megapixels ary 12 megapixels 2.2 hafa misy aperture f / XNUMX, tsy misy stabilizer sary. Eny, manao sonia azy ireo izy Leica, sambany mandeha mihoatra ny silkscreen. Ao amin'ny fakan-tsary eo aloha an'ny Huawei P10 dia hahita tsy latsaky ny 8 megapixels miaraka amina f / 1.9 izay ho ampy sy ampy ho an'ny selfie ihany isika.
SamsungNa izany aza, tsy dia olon-tsy fantatra amin'ity fakantsary ity izy, ny valin'ny Galaxy S dia niavaka nandritra ny taona maro, indrindra fa amin'ny hazavana ambany. Amin'ity tranga ity dia mahita sensor ihany koa isika 12MP miaraka amina aperture f / 1.7 mihoatra ny mahagaga, miaraka amin'ny fanamafisana ny sary optique izay hahafahanao manoratra toa ny pro. Ho an'ny fakantsary eo anoloana dia mijanona ao amin'ny 8MP sy aperture f / 1.7 izy ireo izay tsy ratsy ny maodely amin'ny selfie-tsika.
Farany ny LG G6, ilay fitaovana Koreana Tatsimo dia manana sensor 13MP ao aoriana, ny lehibe miaraka amin'ny f / 1.8 ary ny faharoa manana zoro zoro malalaka, hakana sary kanto kokoa. Mazava ho azy fa na dia maka sary tsara aza i LG dia tsy manana rindrambaiko matanjaka izay ananan'i Huawei sy Samsung, manam-pahaizana manokana momba an'io raharaha io. Ho an'ny selfies dia 5MP ihany no eo anoloana, ambany dia ambany raha jerena ny ambin'ny tsena.
Eto ny zavatra mahazatra dia ny manome ny Samsung Galaxy S8 foana ny mpandresy, ny ekipa Koreana Tatsimo mahay manao zavatra tsara, ary namoaka ny herin'ireo mpanodina azy indray. Exynos 8895 amin'ity Galaxy S8 ity, na dia hiara-tànana aminy Snapdragon 835 amin'ny ambaratonga avo indrindra amin'ny fotoana sasany aza izy io. Hanao izany dia hampiasa ianao RAM 4GB izany dia ho ampy kokoa hanomezana fitoniana sy fihenan'ny rafitra fiasa.
Ao amin'ny Huawei P10 tsy hahita zavatra hafa kely noho ny mpanamboatra mpanamboatra anao izahay Kirin 960 octa-core 2,46GHz, izay mifanome tanana amin'ny RAM 4GB sy ny Mali-MP8 GPU dia hanome ny zava-drehetra eo amin'ilay lalana. Huawei dia tena afaka nanome ny fitaovana farany avo lenta tato ho ato, ary fantatry ny besinimaro ny fisaorana azy.
LG G6 Nanjary tsy dia voamariky bebe kokoa amin'ity lafiny ity izy, nanolotra fitaovana iray niaraka tamin'i Qualcomm ho antsika izy 821GHz Snapdragon 2,35 izay lavitra ny farany fanaperana indrindra eny an-tsena, izany hoe miaraka amin'ny RAM 4GB izay mihoatra ny ampy. Raha tsy misy isalasalana, raha toa ka angovo tsotra no tadiavintsika dia tsy izy no mety indrindra.
Ny teboka manokana farany hifantohanay dia atombotsika amin'ny LG izay manome antsika tontonana 5.7 santimetatra ary vahaolana QHD +, 2880 × 1440 px, izay manana tahan'ny 18: 9 nantsoin'ny orinasa Koreana Tatsimo Fahitana feno. Panel iray mahatalanjona, ary ny hoe LG mahalala tsara ny fomba hidirantsika amin'ny masontsika, indrindra raha izy ireo no iray amin'ireo mpanamboatra televiziona lehibe indrindra eran'izao tontolo izao. Huawei dia tsy mihetsika amin'ny resaka efijery, 5,1 santimetatra an'ny Huawei P10 miaraka amina vahaolana Full HD misy hakitroka 432 ppi ary avereno indray miaraka amin'ny tontonana IPS.
Samsung dia mbola eo ihany, tontonana Super AMOLED QHD (1440 × 2960 teboka) miaraka amin'ny tahan'ny 18,5: 9 somary miavaka. Tsy isalasalana fa ny efijery 5,8-inch asehon'ny Samsung Galaxy S8 dia tsy hamela olona tsy hiraharaha, indrindra fa ny "sisiny" amin'ny sisiny.
Lafiny famaritana hafa
Mba hamaranana dia hanao famoriam-bola kely izahay amin'ireo lafiny mamaritra izay mety hahatonga anao hanapa-kevitra tanteraka amin'ny fitaovana iray na hafa. Manomboka amin'ny fitehirizana izahay, Ny Samsung Galaxy S8 dia manomboka amin'ny 64GB, raha ny Huawei kosa dia mitovy amin'ny filokana 64GB ary aondran'ny LG ho 32GB ny maodely fampidirana. Na izany aza, ny fitaovana telo dia misy slot microSD.
Raha ny amin'ny fanoherana ny ranoIzy io dia singa iray hita ao amin'ireo fitaovana telo rehetra, zavatra iray fahita matetika ary tsy mampiavaka ny telefaona avo lenta. Saingy tsy afaka mijanona miresaka momba ny bateria izahay 3.200 mAh ho an'ny Huawei P10, 3.300 mAh ho an'ny LG G6 ary 3.500 mAh. Ny iray izay tokony hanana ny tahan'ny fizakan-tena indrindra araka ny masontsivana dia ny LG G6, na dia mbola tokony ho hita eo aza ny fivezivezin'ny bateria lehibe an'ny Galaxy S8.
Hofaranantsika amin'ny fisian'ny sy ny vidiny ary isika dia ilay Samsung Galaxy S8 avy amin'ny 799 euro, raha ny Huawei P10 Io no tolotra mora indrindra eny an-tsena, 599 euro ho an'ny avo lenta miaraka amin'ny lalàna rehetra. Malahelo ny fihetsik'i LG nanapa-kevitra ny hampihatra ny G6 tsy latsaky ny € 699. Antenainay araka izany fa ity fampitahana be ity dia nanampy anao hisafidy safidy iray na hafa, ary sarotra kokoa ny misafidy fitaovana omena ny haben'ny tsena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Tonga ny Galaxy S8, ampitahainay amin'ny LG G6 sy Huawei P10
Fantaro ny Samsung Gear 360 vaovao amin'ny halaliny